मिस्टर आरजे : बैदेशिक रोजगारीमा ठक्कर खाएपछि र्‍यापको स्वाद फेर्ने ठिटो !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कमल साउद , १६ श्रावण २०७६
मिस्टर आर जेको इन्ट्री भएसी डान्स फ्लोर सब खाली छोड्देउ
काठमाडौं। सफल भएरमात्रै जीवनका असफलतासँग बदला लिन सकिन्छ। सफल त्यसलाई मानिन्छ जसले कयौँ असफल प्रयासपछि पनि आफूले तोकेको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ। जसले र्याप गीत सुन्छ र्याप गीतलाई मन पराउँछ उसका लागि यी सफल व्यक्तित्व परिचित छन्।
गीत गुनगुनाउने, शब्दहरु कोर्दै जाँदा गीत संगीतमा रुची बढ्दै गयो। संगीतको रुचीका कारण यसमा लाग्न सजिलो हुन्छ भनेर उनले रेडियोमा काम गर्ने सोच बनाए। ती पुराना दिन सम्झिँदै भट्ट भन्छन्, ‘त्यतिबेलासम्म सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पनि लोकप्रिय बन्दै गएको थियो।
फेसबुकमा मैले स्टाटस लेख्दा गजल, कविता नै लेख्थेँ।’ उनका अनुसार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको रेडियो नागरिकबाट उनको स्वर बाहिरियो। रेडियोका आरजेको परिचय पछि उनको करियर बनेर उभारिएला भन्ने उनले अनुमान गरेकै थिएनन्। उनको औपचारिक सांगीतिक यात्रा विसं २०६७ सालबाट सुरु भयो।
डर पछिको जित